Ces pyramides sont suivies par les pyramides à textes des Ve et VIe dynasties, plus petites et fragiles, aujourd'hui en mauvais état de conservation, puis les pyramides de briques XIIe dynastie. Malgré un parement en pierre, ces pyramides sont généralement en ruine en raison de la fragilité de la brique et de l'abandon du modèle de macrostructure à noyau et accrétions. Enfin les pharaons de la XXVe dynastie font construire des pyramides nubiennes aussi bien en briques qu'en pierre.
La pyramide à degrés : pyramide en forme d'escalier, à l'origine une superposition de mastabas de bases différentes. Par exemple, la pyramide de Djéser comporte six gradins pour une hauteur de 60 mètres et une base de 109 × 121 mètres. Les tranches de maçonnerie, inclinées de 16° par rapport à la verticale, font 2,60 mètres de hauteur.
La pyramide rhomboïdale : pyramide à deux plans inclinés, l’un partant du bas jusqu’au milieu de l’édifice (58° de pente), l’autre allant vers la pointe (43° 22’). Cette rupture de pente serait due à un changement de plan intervenu durant la construction.
La pyramide à faces lisses : pyramide à quatre parois droites, recouvertes de calcaire très fin leur donnant un aspect lisse. La pyramide de Khéops atteignait 146 mètres de hauteur (actuellement 138 mètres) pour une base de 230 mètres et une pente de 51° 50’. Celle de Khéphren a une pente de 53° pour une hauteur de 143,50 mètres et une base de 215 mètres. Quant à celle de Mykérinos, elle mesurait 66 mètres de hauteur pour une base de 105 mètres et une pente de 51° 20’.
Différents types de rampes de construction.
style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;" style="font-size:90%;"
Éric Guerrier, Les pyramides , Éditions Cheminements, 2006 (lire en ligne), p. 430
Vito Maragioglio et Celeste Rinaldi, L'Architettura delle Piramidi Menfite, 1963-1977, Parte III, planche 10
Pierre Tallet, « Les papyrus de la Mer Rouge I, le journal de Merer (papyrus Jarf A et B) », mémoires publiés par l'Institut français d'archéologie orientale (MIFAO), Le Caire, 2017. Ce lot de papyrus, découvert sur le site de Ouadi el-Jarf lors de la campagne de fouilles de 2013 de Pierre Tallet, donne des indications sur plusieurs éléments du chantier royal des pyramides de Gizeh. Dans ce lot, le contremaître Merer dirigeant une équipe de bateliers et de transporteurs, évoque notamment comment ils ont dû ouvrir des digues pour détourner l'eau du Nil en crue et creuser des canaux artificiels pour frayer un chemin aux bateaux chargés des blocs de pierre jusqu'au chantier.
« Égypte : une pyramide de 3700 ans découverte près du Caire »
Une nouvelle pyramide découverte en Égypte par des archéologues belges RTBF, 21 février 2013.